कोहली कसरी बने विश्वकै अब्बल क्रिकेटर ? पढ्नुहोस् उनको संघर्षपूर्ण जीवनी
२ मंसिर २०७५, आईतवार
काठमाडौं । भारतीय क्रिकेट टिमका कप्तान हुन् विराट कोहली । उनी सबै फर्म्याटका कप्तान हुन् । विराट कोहलीको जन्म ५ नोभेम्बर १९८८ मा पंजाबी परिवारमा भएको थियो । उनको पिता प्रेम कोहली एक अपराधिक वकिल थिए भने माता सरोज कोहली एक गृहिणी हुन् । उनका एक दिदी र एक दाजु छन्, जसको नाम भावना र विकास हो । उनको परिवारका अनुसार कोहली ३ वर्षका हुँदा नै हातमा क्रिकेट ब्याट समाउन थालिसकेका थिए । र, पितालाई बलिङ गर्न लगाउँथे । त्यसकै प्रतिफल उनी अहिले संसारकै अब्बल क्रिकेटरको रुपमा चिनिन्छन् ।
कोहली उत्तम नगरमा हुर्के र विशाल भारती पब्लिक स्कूलबाट शिक्षा लिए । सन् १९८८ मा पश्चिमी दिल्ली क्रिकेट एकेडेमी बन्यो । कोहली ९ वर्षको उमेरमै एकेडेमीमा भर्ना भए । कोहलीको क्रिकेटप्रतिको लगाव देखेर छिमेकीहरुले पिता प्रेमलाई भन्ने गर्थे कि छोरालाई गल्लीमा होइन एकेडेमीमा लगेर व्यवसायिक क्रिकेट सिकाउन लग्नुस् । राजीवकुमार शर्मासँग कोहलीले प्रशिक्षण लिए र सुमित डोरा एकेडेमीमा म्याच पनि खेले ।
९ कक्षामा उनी सविएर कन्वेन्टमा राखियो ताकि उनको क्रिकेट प्रशिक्षणमा सहयोग मिल्न सकोस् । खेलका साथै कोहली पढाइमा पनि अब्बल थिए । उनलाई शिक्षकहरुले एक होनहार बुद्धिमान बच्चा भन्ने गर्थे ।
सन् २००४ को अन्त्यतिर उनी Under 17 Delhi Cricket Team को सदस्य बने । र, उनले Vijay Merchant Trophy खेले । यस चार म्याचको सिरिजमा उनले ४५० भन्दा बढी रन बनाएका थिए र उनले एक म्याचमा नटआउट २५१ रन बनाएका थिए । अर्को वर्षको उक्त ट्रफीमा उनी चर्चा चुलियो । त्यसबेला उनले ७ खेलमा ७५७ रन बनाएर सर्वाधिक रनको किर्तिमान बनाए । यस प्रतियोगितामा विराट कोहलीले ८४.११ मा रन बनाएका थिए जसमा २ शतक पनि सामेल थिए ।
जुलाई २००६ मा विराट कोहली भारतको Under-19 Cricket टोलीमा अटाए । उनको पहिलो विदेश टूर इंग्ल्याण्ड थियो । उक्त इंग्ल्याण्ड टूरमा उनले तीन एक दिवसीय म्याचमा १०५ रन बनाएका थिए । यसै टूरमा तीन टेष्ट म्याचमा उनले ४९ रनको औसतमा रन बनाएकाथिए । भारत त्यसबेला दुवै सिरिज जितेर घर फर्केको थियो । सोही वर्षपछि विराटले १९ वर्षमुनिको क्रिकेटमा पाकिस्तानविरुद्ध उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसपछि उनको प्रतिभा देखेर उनलाई १९ वर्षमुनिको टिममा स्थायी रुपमा राखियो ।
१८ डिसेम्बर २००६ मा ब्रेन स्ट्रोकको कारण उनको पिताको मृत्यु भयो । आफ्नो प्रारम्भिक जीवन याद गर्दै कोहलीले भनेका थिए, ‘मैले आफ्नो जीवनमा धेरै कुरा देखेँ । मैले युवावस्थामा पिता गुमाएँ । जसले पारिवारिक व्यापार पनि डगमगाएको थियो । जसकारण हामी भाडामा बस्नु परेको थियो ।’
उनी एक मध्यक्रमका ब्याट्सम्यान हुन् र दायाँ हाते मध्यम गतिका बलर पनि । उनी प्रथम श्रेणीको क्रिकेटमा दिल्लीको प्रतिनिधित्व गर्छन् र इंडियन प्रिमियर लिगमा रोयल च्यालेन्जर्स ब्याङ्लोरका कप्तान हुन् । उनले वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडेमीको लागि पनि खेले । कोहलीले सन् २००८ मा एक दिवसीय अन्र्तराष्ट्रिय क्रिकेट शुरुआत गरे र उनी सन् २०११ को विश्वकप जित्ने टिमका सदस्य समेत थिए । एकदिवसीय टिममा नियमित हुँदै गर्दा कोहली किंग्सटनमा वेस्ट इंडिजविरुद्ध २०११ मा आफ्नो पहिलो टेस्ट खेले । कोहली २०१२ मा आइसीसी वानडे प्लेयरका प्राप्तकर्ता थिए । नोभेम्बर २०१२ मा उनले पहिलोपटक एक दिवसीय क्रिकेटमा ब्याटिङतर्फ शीर्षस्थान पाए ।
कोहली चर्चामा आए जतिबेला उनी आफ्नो पिताको मृत्युको दिन कर्नाटकविरुद्ध रणजी ट्रफी म्याचमा दिल्लीका लागि खेलिरहेका थिए । कोहली मलेसियामा आयोजित २००८ मा यु १९ विश्वकपमा विजयी भारतीय टिमका कप्तान थिए । उनले चार नम्बरमा ब्याटिङ गर्दै ४७ रनको औसतमा ६ खेलमा २३५ रन बनाएका थिए । जसमा उनले वेस्ट इंडिजविरुद्ध शतक पनि प्रहार गरेका थिए । उनी आफ्नो हरेक म्याच गम्भीरतापूर्वक लिन्छन् । कोहलीले अष्टे«लियामा २००९ मा इमर्जिङ प्लेयर्स टूर्नामेंटमा भारतको जीतमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका थिए । दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध फाइनलमा कोहलीले शतक हानेका थिए । र, भारत १७ रनले विजयी बनेको थियो ।
सन् २०१४ मा महेन्द्रसिंह धोनीले टेस्ट क्रिकेटबाट सन्यास लिएपछि कोहलीलाई कप्तानीको जिम्मा दिइएको थियो ।
उनले टेस्ट क्रिकेटमा ६ हजार ३३१ रन बनाइसकेका छन् । जसमा २४ शतक र ६ दोहोरो शतक समावेश छन् । त्यस्तै उनले १९ वटा अर्धशतक समेत प्रहार गरेका छन् ।
एक दिवसीय क्रिकेटतर्फ फर्केर हेर्दा उनी विश्वकै सफल क्रिकेटरमा गनिन्छन् । उनले एक दिवसीय क्रिकेटमा १० हजार २३२ रन बनाएका छन् । जसमा ३८ शतक र ४८ अर्धशतक समावेश छन् ।
टी ट्वान्टीमा उनले २ हजार १०२ रन बनाएका छन्, जसमा १८ अर्धशतक सामेल छन् ।
उनले टेस्ट र एक दिवसीय गरी अहिलेसम्म ६२ शतक लगाएका छन् । यो अहिले खेलिरहेका क्रिकेटरहरुमध्ये सबैभन्दा बढी हो । सचिनले टेस्ट र एक दिवसीय गरी सय शतक हानेका छन् । उनले सन्यास लिइसकेका छन् ।
आइसीसीको वरियताअनुसार कोहली अहिले टेस्ट र एक दिवसीयतर्फ शीर्षस्थानमा रहेका छन् ।
विराट कोहलीको विवाह सन् २०१७ मा चर्चित बलिउड अभिनेत्री अनुष्का शर्मासँग भयो ।
Tagsक्रिकेट विराट कोहली
आइपीएल : कोलकत्ता नाइट राइडर्सको दोस्रो जित
मैले सबै बार्सिलोनाका लागि गरेको हुँ : मेस्सी
आईपीएल : लयमा देखिएको दिल्लीलाई रोक्ला त हैदरावादले ?
अग्रिम महसुल तिर्नुस, छुट लिनुस्ः प्राधिकरण
‘शिक्षालाई सूचना प्रविधिसँग जोड्न आवश्यक छ’
सिन्धुलीगढीलाई पर्यटकीयस्थलका रुपमा विकास गरिने छः मन्त्री भट्टराई
दृष्टिकोण प्रभाव र जीवन प्रवृत्ति
विमानस्थल निर्माणको लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर
नेपालीका लागि इजरायली श्रमबजार खुला, यी क्षेत्रमा हुनेछ रोजगारीको अवसर
मार्क्सवादी दृष्टिकोणबारे संक्षिप्त चर्चा
‘युवामा रचनात्मक साेच हुनुपर्छ’
अपराध नियन्त्रणमा काभ्रेका एसपी पौडेलको अग्रता
१० वर्षीय बालिकासहित चितवनमा १२ जनामा कोरोना
कुवेतमा नयाँ राजा चयन
भारतका उपराष्ट्रपतिलाई कोरोना संक्रमण
कोरोनाबाट सप्तरीका एक युवकको धरानमा मृत्यु
यी हुन् जाडो छल्न नेपाल आएका चरा (हेर्नुहोस् तस्वीरमा)